အင်ျဂုလိမာလတဲ့ ... ဟေ့!!! -မောငျဉာဏျစိနျ-
အင်ျဂုလိမာလတဲ့ ... ဟေ့!!!
ယတောဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ
သဉ်စိစ်စပါဏံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပတော
တနေ သစ်စနေ၊ သောတ်ထိတေ ဟောတု
ပရိတျကွီး ၁၁ သုတျရှိသညျကို လူအတျော မြားမြားသိကွပါသညျ။ ၎င်းငျး ၁၁ သုတျတှငျ အင်ျဂုလိမာ လသုတျသညျလညျး အပါအဝငျဖွဈသညျ။ အထကျ ဖျောပွပါပရိတျတျောသညျ အင်ျဂုလိမာလသုတျတျောမှ ဖွဈပသေညျ။ ယငျးပရိတျတျောမှာ မွတျစှာဘုရားက အရှငျအင်ျဂုလိမာလအား သငျကွားပေးတျောမူခဲ့သော ပရိတျတျောဖွဈလသေညျ။
သာဝတ်ထိပွညျ ပသနေဒီကောသလမငျးကွီး ထံ၌ အန်တကမညျသော ပုရောဟိတျပုဏ်ဏားကွီး တဈဦးရှိ၍ ၎င်းငျးငျး၏ဇနီးဖွဈသူ၏ အမညျမှာ မန်ထာနီ ဖွဈပသေညျ။ အင်ျဂုလိမာလသညျ ယငျးပုဏ်ဏားကွီးနှငျ့ ပုဏ်ဏေးမတို့၏ သားဖွဈလသေညျ။ ငယျမညျမှာ အဟိံ သကဖွဈလသေညျ။ အရှယျရောကျသညျ့အခါ တက်ကသိုလျဆရာကွီးတဈဦးထံတှငျ ပညာသငျကွား စခေဲ့သညျ။ ဆရာက လကျညှိုးတဈထောငျပွညျ့ အောငျ ပူဇျောပါက အ<ကငျးအကနျြ ဆရာစားမခနျြ ဘဲ ပညာကုနျသငျကွားပေးမညျဟုဆိုသဖွငျ့ တက်က သိုလျဆရာကွီးကို ပူဇျောရနျအတှကျ လကျနကျအ ပွညျ့အစုံနှငျ့ မွို့မှထှကျပွီး တောမှာနလေသေညျ။
အနီးအနား လာသမြှလူတှကေို အတငျး လိုကျသတျပွီး လကျညှိုးကို ဖွတျယူလသေညျ။ ရရှိ သော လကျညှိုးမြားကို ထိုအရပျဤအရပျမှာထား သဖွငျ့ ကြီး ငှကျစသညျတို့ ခြီယူသှားကွလသေညျ။ "ဤသို့ထားသဖွငျ့ မသငျ့ခသြေေးရသမြှ လကျညှိုး ကို ကွိုးဖွငျ့ သီကုံး၍ ပနျးကုံးကဲ့သို့ လညျတှငျ ဆှဲထားမှ ငါ့အား ပွညျ့စုံလှယျခြိမျ့မညျ" ဟု ကွံလကျြ နောကျထပျရသညျ့ လကျညှိုးမြားကို ကွိုးနှငျ့သီပွီး လညျပငျးပျေါတှငျ ဆှဲထားလသေညျ။
ယခုကဲ့သို့ အင်ျဂုလိမာလသညျ လူမြားကို လိုကျလံသတျဖွတျနသေညျ့အတှကျ ရှငျဘုရငျကိုယျ တိုငျခေါငျးဆောငျပွီး တပျမတျောသားတှနှေငျ့ လိုကျ ဖမျးရနျ အစီအစဉျလုပျရတော့သညျ။ ယငျးသို့လိုကျ ဖမျးသဖွငျ့ အဖမျးခံရပါက မိမိ၏သားသညျ သေ တော့မညျကို စိုးရိမျပွီး အင်ျဂုလိမာလအမသေညျ ၎င်းငျး၏သားရှိရာ တောအတှငျးသို့ လိုကျသှားလတေော့ သညျ။ ပုဏ်ဏားကွီးက မသှားဝံ့ဟုဆိုသဖွငျ့ ပုဏ်ဏားမ ကွီးက ကိုယျတိုငျလိုကျသှားခွငျးဖွဈပသေညျ။ မိခငျ ၏မတ်ေတာသညျ မညျမြှကွီးမားသညျကို ယခုခတျေ လူငယျမြား သတိပွုကွရနျ ဖွဈလသေညျ။ အကြှနျုပျ အားသတျလိုလညျး သတျပစေ သား၏သခွေငျးကို မမွငျလိုဟုဆိုကာ မိခငျပုဏ်ဏေးမကွီးသညျ သား အင်ျဂုလိမာလရှိရာ တောအရပျသို့ ထှကျသှားလေ တော့သညျ။
အင်ျဂုလိမာလကလညျး လကျညျှိုးတဈထောငျ ပွညျ့ဖို့ တဈခြောငျးသာ လိုတော့သညျ့အတှကျ ယငျး နတှေ့ငျ မညျသူ့ကို တှတှေ့သေ့တျမညျဟု အဓိဋ်ဌာနျ ပွုထားသညျ့အတှကျ မိခငျကိုတှလြေှ့ငျလညျး သတျ မညျသာဖွဈပသေညျ။
ဘုရားသခငျသညျ ထိုနနေံ့နကျတှငျထ၍ လောကကိုရှုမွငျလသေျော အင်ျဂုလိမာလကို တှေ့ မွငျရသညျ။ တရားဟောလိုကျလြှငျ သစ်စာလေးပါး ကို သဘောပေါကျ၍ ရဟနျးဘဝသို့ ရောကျမညျ။ ယငျးသို့မြှ မဟုတျလြှငျ မိခငျကို သတျမှုကွောငျ့ အနန်တရိယကံထိုကျ၍ အဝိစိငရဲသို့ ကရြောကျမညျကို မွငျတျောမူသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သပိတျ၊ သင်ျကနျးကို ပွငျ၍ သာဝတ်ထိမွို့သို့ ဆှမျးခံဝငျတျောမူသညျ။ ဆှမျး ခံရာမှတဈဖနျ အင်ျဂုလိမာလရှိရာ တောအုပျသို့ <က တျောမူသညျ။ မိခငျဖွဈသူ မန်တာနီပုဏ်ဏေးမနှငျ့ အင်ျဂုလိမာလ အကွား စင်ျကွံ<ကတျောမူသညျ။
အင်ျဂုလိမာလကလညျး "ဒီလမျးကို လူလေး ငါးဆယျစုပွီးလာတာတောငျ ငါ့လကျတှငျးက မလှတျ ကွဘူး။ ဒီရဟနျးကွီးတဈပါးတညျး မကွောကျမရှံ့ ပဲ ရဲရဲတငျးတငျးလာနတောဟာ သိပျအံ့သွစရာ ကောငျးတာပဲ။ ဒီရဟနျးကွီးကို ငါသတျတော့မယျ" ဟု ကွံပွီးဘုရားသခငျကို သတျရနျလိုကျပသေညျ။ ဘုရားရှငျသညျ ခပျမှနျမှနျပငျ စင်ျကွံ<ကနသေျောလညျး ဘုရားရှငျ၏ တနျခိုးတျောကွောငျ့ အင်ျဂုလိမာလသညျ မလိုကျနိုငျခြေ။ ဘုရားရှငျ၏ တနျခိုးတျောကွောငျ့ အင်ျဂုလိမာလလြှောကျနသေော မွသေညျ လှိုငျးတံပိုး ကဲ့သို့ နိမျ့တုံမွငျ့တုံဖွဈနပွေီး ဘုရားသခငျလြှောကျ နသေော မွပွေငျသညျ စညျမကျြနှာကဲ့သို့ ညီညာ လကျြရှိသညျ။ အင်ျဂုလိမာလသညျ အလှနျပငျပနျး လကျြရှိတော့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ အင်ျဂုလိမာလနှငျ့ ဘုရားရှငျတို့သညျ အောကျပါအတိုငျး အပွနျအလှနျ ပွောဆိုကွရတော့သညျ။
အင်ျဂုလိမာလ။။ အရှငျရဟနျးရပျဦး။ ရပျဦး လော့။
ဘုရားရှငျ။။ ငါကားရပျ၏။ သငျသာမ ရပျ။
အင်ျဂုလိမာလ။။ အရှငျဘုရား သငျသညျ မတနျ့မနှေးသှားလကျြကိုပငျ "ငါရပျ၏။" အကြှနျုပျ ရပျနသေညျကို "သငျကားမရပျ" ဟု အဘယျ ကွောငျ့ ဆိုပါသနညျး။ မုသာဝါဒသညျ ရဟနျးတို့၏ အလအေ့ထပငျလော။
ထိုအခါတှငျ ဘုရားရှငျက အင်ျဂုလိမာလအား အောကျပါအတိုငျး ပွနျကွားလိုကျလသေညျ။
ဘုရားရှငျ။။ အခငျြးအင်ျဂုလိမာလ ငါ သညျ ပါဏတိပါတစသော မကောငျးမှုဒုစရိုကျတို့၌ မလိုကျမစား ကွဉျရှောငျရှားသညျဖွဈ၍ အပါယျ လားခွငျးမရှိ သုဂတိတို့၏ အထှပျအထိပျဖွဈသော နိဗ်ဗာနျလမျးဝ၌သာ တညျရကား ရပျနသေညျ မညျ၏။ သငျကား ဒုစရိုကျတရားတို့ကို မြားစှာ ပွုလရှေိ့သညျ။ သတ်တဝါ ခပျသိမျးတို့အား သနား ခဈြခငျခွငျးမရှိသညျ။ ကောငျးသော အကငျြ့စာရိတ်တ မရှိသညျဖွဈ၍စုတေ သောအခါ ငရဲ၊ ပွိတ်တာ တိရစ်ဆာနျ အသူရကာယျ ဟူသော အပါယျလေးခှငျသို့ စငျစဈ သှားအံ့သောသူ ဖွဈရကား။ ရပျနားသညျမမညျ။ သှားသညျပငျဖွဈ၏။ ထို့ကွောငျ့ ငါကားရပျ၏။ သငျကားမရပျ ဟူ၍ ငါ ဆိုသတညျး။ ထိုအခါမှ အင်ျဂုလိမာလသညျ လကျထဲ က ဓားကိုလှတျခပြွီး ဘုရားရှငျကို ရှိခိုးရငျး တပညျ့ အဖွဈ အသိအမှတျပွုရနျ တောငျးပနျလသေညျ။ ဘုရားရှငျကလညျး အင်ျဂုလိမာလကို ဇတေဝနျ ကြောငျးတျောသို့ ချေါသှားပွီး ရဟနျးပွုစတေော့ သညျ။ အင်ျဂုလိမာလညျး ဘုရားရှငျဆုံးမသညျ့အတိုငျး တရားအားထုတျရာ ရဟန်တာဖွဈသှားတော့သညျ။
ရဟန်တာပငျဖွဈသျောလညျး အရှငျ အင်ျဂုလိမာလ ဆှမျးခံကွှလြှငျ လောငျးလှူမညျ့သူမရှိကွ။ ဤသူ သညျ ငါတို့အဖကိုသတျ၏။ ငါတို့သားကိုသတျ၏။ စသညျဖွငျ့ ပွောကွလကျြ အိမျတံခါးကို ပိတျထား ကွလသေညျ။ အခြို့မှာရှောငျနကွေ၍ အခြို့မှာ အုတျ၊ ခဲ၊ တုတျတို့ဖွငျ့ပငျ ပဈကွသညျ။ အင်ျဂုလိမာလ မထရျေခမြာ ဆှမျးတဈဇှနျးမြှကိုပငျ မရရှိသဖွငျ့ ကြောငျးသို့ရောကျသောအခါ အခွားသော သံဃာ တို့က မြှတကာ သုံးဆောငျစရေသညျ။ မွတျစှာဘု ရားရှငျကွားသိသောအခါ အရှငျအင်ျဂုလိမာလမထရျေ အားချေါယူပွီး "ယခုဘဝ၌ တဈထောငျမြှသော လူကိုပငျ သငျသတျခဲ့သော ပါဏာတိပါတကံ၏ ဒိဋ်ဌဓမ်မအကြိုးဆကျပငျတညျး"ဟု ဆုံးမပွီး ဆှမျး၊ ကှမျးကိစ်စစသညျအတှကျ အထကျဖျောပွပါ ပရိတျ ဂါထာတျောကို သငျကွားပွသပေးတျောမူလသေညျ။
ကိုယျဝနျမှခမျြးသာစှာ မမှေးဖှားနိုငျသူမြား အား အထကျဖျောပွပါ ပရိတျတျောဖွငျ့ ရှတျဆို၍ ကုသခဲ့ရာ ကိုယျဝနျသညျ မိခငျလောငျးတို့သညျ ခမျြး သာစှာ မှေးဖှားနိုငျကွပသေညျ။ ထိုအခါမှ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို့သညျ "အရှငျအင်ျဂုလိမာလသညျ တနျခိုးကွီးပစှေ"ဟု ပွောဆိုကွပွီး သဒ်ဓါတရားဖွဈ ၍ လှူဒါနျးပူဇျောကွလသေညျ။ ရှေးခတျေမွနျမာ လူမြိုးတို့သညျလညျးကောငျး ယခုသျောတှငျလညျး ကောငျး ကြေးလကျဒသေနေ မွနျမာတို့သညျလညျး ကောငျး ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးမြား မှေးဖှား နိုငျခွငျးမရှိသောအခါ၌ ရဟနျးသံဃာတျောမြား သကျကွီးရှယျအိုမြားအား ပငျ့ဖိတျ၍ အင်ျဂုလိမာလ သုတျတျောလာ အထကျဖျောပွပါ ဂါထာတျောကို ရှတျဖတျလရှေိ့ကွကွောငျး ရေးသားတငျပွအပျပေ သညျ။
၁။ ဇိနတ်ထပကာသနီကမျြး(ကြီးသဲလေးထပျ ဆရာတျော)
၂။ ငါးပါးသီလအကွောငျး မွတျစှာဘုရားအ ကွောငျး သံဃာတျောမြားအကွောငျး၊ ဓမ်မအကွောငျး ဗုဒ်ဓသာသနာအရေးတျောပုံ(ဝနျကွီးခြုပျဟောငျးဦးနု)
အင်္ဂုလိမာလတဲ့ ... ဟေ့!!!
ယတောဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ
သဉ္စိစ္စပါဏံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတာ
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ရှိသည်ကို လူအတော် များများသိကြပါသည်။ ၎င်း ၁၁ သုတ်တွင် အင်္ဂုလိမာ လသုတ်သည်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ အထက် ဖော်ပြပါပရိတ်တော်သည် အင်္ဂုလိမာလသုတ်တော်မှ ဖြစ်ပေသည်။ ယင်းပရိတ်တော်မှာ မြတ်စွာဘုရားက အရှင်အင်္ဂုလိမာလအား သင်ကြားပေးတော်မူခဲ့သော ပရိတ်တော်ဖြစ်လေသည်။
သာဝတ္ထိပြည် ပသေနဒီကောသလမင်းကြီး ထံ၌ အန္တကမည်သော ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏားကြီး တစ်ဦးရှိ၍ ၎င်းင်း၏ဇနီးဖြစ်သူ၏ အမည်မှာ မန္ထာနီ ဖြစ်ပေသည်။ အင်္ဂုလိမာလသည် ယင်းပုဏ္ဏားကြီးနှင့် ပုဏ္ဏေးမတို့၏ သားဖြစ်လေသည်။ ငယ်မည်မှာ အဟိံ သကဖြစ်လေသည်။ အရွယ်ရောက်သည့်အခါ တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးတစ်ဦးထံတွင် ပညာသင်ကြား စေခဲ့သည်။ ဆရာက လက်ညှိုးတစ်ထောင်ပြည့် အောင် ပူဇော်ပါက အ<ကင်းအကျန် ဆရာစားမချန် ဘဲ ပညာကုန်သင်ကြားပေးမည်ဟုဆိုသဖြင့် တက္က သိုလ်ဆရာကြီးကို ပူဇော်ရန်အတွက် လက်နက်အ ပြည့်အစုံနှင့် မြို့မှထွက်ပြီး တောမှာနေလေသည်။
အနီးအနား လာသမျှလူတွေကို အတင်း လိုက်သတ်ပြီး လက်ညှိုးကို ဖြတ်ယူလေသည်။ ရရှိ သော လက်ညှိုးများကို ထိုအရပ်ဤအရပ်မှာထား သဖြင့် ကျီး ငှက်စသည်တို့ ချီယူသွားကြလေသည်။ "ဤသို့ထားသဖြင့် မသင့်ချေသေးရသမျှ လက်ညှိုး ကို ကြိုးဖြင့် သီကုံး၍ ပန်းကုံးကဲ့သို့ လည်တွင် ဆွဲထားမှ ငါ့အား ပြည့်စုံလွယ်ချိမ့်မည်" ဟု ကြံလျက် နောက်ထပ်ရသည့် လက်ညှိုးများကို ကြိုးနှင့်သီပြီး လည်ပင်းပေါ်တွင် ဆွဲထားလေသည်။
ယခုကဲ့သို့ အင်္ဂုလိမာလသည် လူများကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်နေသည့်အတွက် ရှင်ဘုရင်ကိုယ် တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီး တပ်မတော်သားတွေနှင့် လိုက် ဖမ်းရန် အစီအစဉ်လုပ်ရတော့သည်။ ယင်းသို့လိုက် ဖမ်းသဖြင့် အဖမ်းခံရပါက မိမိ၏သားသည် သေ တော့မည်ကို စိုးရိမ်ပြီး အင်္ဂုလိမာလအမေသည် ၎င်း၏သားရှိရာ တောအတွင်းသို့ လိုက်သွားလေတော့ သည်။ ပုဏ္ဏားကြီးက မသွားဝံ့ဟုဆိုသဖြင့် ပုဏ္ဏားမ ကြီးက ကိုယ်တိုင်လိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ မိခင် ၏မေတ္တာသည် မည်မျှကြီးမားသည်ကို ယခုခေတ် လူငယ်များ သတိပြုကြရန် ဖြစ်လေသည်။ အကျွန်ုပ် အားသတ်လိုလည်း သတ်ပစေ သား၏သေခြင်းကို မမြင်လိုဟုဆိုကာ မိခင်ပုဏ္ဏေးမကြီးသည် သား အင်္ဂုလိမာလရှိရာ တောအရပ်သို့ ထွက်သွားလေ တော့သည်။
အင်္ဂုလိမာလကလည်း လက်ညှိုးတစ်ထောင် ပြည့်ဖို့ တစ်ချောင်းသာ လိုတော့သည့်အတွက် ယင်း နေ့တွင် မည်သူ့ကို တွေ့တွေ့သတ်မည်ဟု အဓိဋ္ဌာန် ပြုထားသည့်အတွက် မိခင်ကိုတွေ့လျှင်လည်း သတ် မည်သာဖြစ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်သည် ထိုနေ့နံနက်တွင်ထ၍ လောကကိုရှုမြင်လေသော် အင်္ဂုလိမာလကို တွေ့ မြင်ရသည်။ တရားဟောလိုက်လျှင် သစ္စာလေးပါး ကို သဘောပေါက်၍ ရဟန်းဘ၀သို့ ရောက်မည်။ ယင်းသို့မျှ မဟုတ်လျှင် မိခင်ကို သတ်မှုကြောင့် အနန္တရိယကံထိုက်၍ အ၀ိစိငရဲသို့ ကျရောက်မည်ကို မြင်တော်မူသည်။ ထို့ကြောင့် သပိတ်၊ သင်္ကန်းကို ပြင်၍ သာဝတ္ထိမြို့သို့ ဆွမ်းခံဝင်တော်မူသည်။ ဆွမ်း ခံရာမှတစ်ဖန် အင်္ဂုလိမာလရှိရာ တောအုပ်သို့ <က တော်မူသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ မန္တာနီပုဏ္ဏေးမနှင့် အင်္ဂုလိမာလ အကြား စင်္ကြံ<ကတော်မူသည်။
အင်္ဂုလိမာလကလည်း "ဒီလမ်းကို လူလေး ငါးဆယ်စုပြီးလာတာတောင် ငါ့လက်တွင်းက မလွတ် ကြဘူး။ ဒီရဟန်းကြီးတစ်ပါးတည်း မကြောက်မရွံ့ ပဲ ရဲရဲတင်းတင်းလာနေတာဟာ သိပ်အံ့သြစရာ ကောင်းတာပဲ။ ဒီရဟန်းကြီးကို ငါသတ်တော့မယ်" ဟု ကြံပြီးဘုရားသခင်ကို သတ်ရန်လိုက်ပေသည်။ ဘုရားရှင်သည် ခပ်မှန်မှန်ပင် စင်္ကြံ<ကနေသော်လည်း ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် အင်္ဂုလိမာလသည် မလိုက်နိုင်ချေ။ ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် အင်္ဂုလိမာလလျှောက်နေသော မြေသည် လှိုင်းတံပိုး ကဲ့သို့ နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေပြီး ဘုရားသခင်လျှောက် နေသော မြေပြင်သည် စည်မျက်နှာကဲ့သို့ ညီညာ လျက်ရှိသည်။ အင်္ဂုလိမာလသည် အလွန်ပင်ပန်း လျက်ရှိတော့သည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂုလိမာလနှင့် ဘုရားရှင်တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြရတော့သည်။
အင်္ဂုလိမာလ။။ အရှင်ရဟန်းရပ်ဦး။ ရပ်ဦး လော့။
ဘုရားရှင်။။ ငါကားရပ်၏။ သင်သာမ ရပ်။
အင်္ဂုလိမာလ။။ အရှင်ဘုရား သင်သည် မတန့်မနှေးသွားလျက်ကိုပင် "ငါရပ်၏။" အကျွန်ုပ် ရပ်နေသည်ကို "သင်ကားမရပ်" ဟု အဘယ် ကြောင့် ဆိုပါသနည်း။ မုသာဝါဒသည် ရဟန်းတို့၏ အလေ့အထပင်လော။
ထိုအခါတွင် ဘုရားရှင်က အင်္ဂုလိမာလအား အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ကြားလိုက်လေသည်။
ဘုရားရှင်။။ အချင်းအင်္ဂုလိမာလ ငါ သည် ပါဏတိပါတစသော မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့၌ မလိုက်မစား ကြဉ်ရှောင်ရှားသည်ဖြစ်၍ အပါယ် လားခြင်းမရှိ သုဂတိတို့၏ အထွပ်အထိပ်ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်လမ်းဝ၌သာ တည်ရကား ရပ်နေသည် မည်၏။ သင်ကား ဒုစရိုက်တရားတို့ကို များစွာ ပြုလေ့ရှိသည်။ သတ္တ၀ါ ခပ်သိမ်းတို့အား သနား ချစ်ခင်ခြင်းမရှိသည်။ ကောင်းသော အကျင့်စာရိတ္တ မရှိသည်ဖြစ်၍စုတေ သောအခါ ငရဲ၊ ပြိတ္တာ တိရစ္ဆာန် အသူရကာယ် ဟူသော အပါယ်လေးခွင်သို့ စင်စစ် သွားအံ့သောသူ ဖြစ်ရကား။ ရပ်နားသည်မမည်။ သွားသည်ပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ငါကားရပ်၏။ သင်ကားမရပ် ဟူ၍ ငါ ဆိုသတည်း။ ထိုအခါမှ အင်္ဂုလိမာလသည် လက်ထဲ က ဓားကိုလွှတ်ချပြီး ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုးရင်း တပည့် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် တောင်းပန်လေသည်။ ဘုရားရှင်ကလည်း အင်္ဂုလိမာလကို ဇေတ၀န် ကျောင်းတော်သို့ ခေါ်သွားပြီး ရဟန်းပြုစေတော့ သည်။ အင်္ဂုလိမာလည်း ဘုရားရှင်ဆုံးမသည့်အတိုင်း တရားအားထုတ်ရာ ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့သည်။
ရဟန္တာပင်ဖြစ်သော်လည်း အရှင် အင်္ဂုလိမာလ ဆွမ်းခံကြွလျှင် လောင်းလှူမည့်သူမရှိကြ။ ဤသူ သည် ငါတို့အဖကိုသတ်၏။ ငါတို့သားကိုသတ်၏။ စသည်ဖြင့် ပြောကြလျက် အိမ်တံခါးကို ပိတ်ထား ကြလေသည်။ အချို့မှာရှောင်နေကြ၍ အချို့မှာ အုတ်၊ ခဲ၊ တုတ်တို့ဖြင့်ပင် ပစ်ကြသည်။ အင်္ဂုလိမာလ မထေရ်ခမျာ ဆွမ်းတစ်ဇွန်းမျှကိုပင် မရရှိသဖြင့် ကျောင်းသို့ရောက်သောအခါ အခြားသော သံဃာ တို့က မျှတကာ သုံးဆောင်စေရသည်။ မြတ်စွာဘု ရားရှင်ကြားသိသောအခါ အရှင်အင်္ဂုလိမာလမထေရ် အားခေါ်ယူပြီး "ယခုဘ၀၌ တစ်ထောင်မျှသော လူကိုပင် သင်သတ်ခဲ့သော ပါဏာတိပါတကံ၏ ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးဆက်ပင်တည်း"ဟု ဆုံးမပြီး ဆွမ်း၊ ကွမ်းကိစ္စစသည်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ ပရိတ် ဂါထာတော်ကို သင်ကြားပြသပေးတော်မူလေသည်။
ကိုယ်ဝန်မှချမ်းသာစွာ မမွေးဖွားနိုင်သူများ အား အထက်ဖော်ပြပါ ပရိတ်တော်ဖြင့် ရွတ်ဆို၍ ကုသခဲ့ရာ ကိုယ်ဝန်သည် မိခင်လောင်းတို့သည် ချမ်း သာစွာ မွေးဖွားနိုင်ကြပေသည်။ ထိုအခါမှ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို့သည် "အရှင်အင်္ဂုလိမာလသည် တန်ခိုးကြီးပေစွ"ဟု ပြောဆိုကြပြီး သဒ္ဓါတရားဖြစ် ၍ လှူဒါန်းပူဇော်ကြလေသည်။ ရှေးခေတ်မြန်မာ လူမျိုးတို့သည်လည်းကောင်း ယခုသော်တွင်လည်း ကောင်း ကျေးလက်ဒေသနေ မြန်မာတို့သည်လည်း ကောင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ မွေးဖွား နိုင်ခြင်းမရှိသောအခါ၌ ရဟန်းသံဃာတော်များ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ပင့်ဖိတ်၍ အင်္ဂုလိမာလ သုတ်တော်လာ အထက်ဖော်ပြပါ ဂါထာတော်ကို ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိကြကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပေ သည်။
၂။ ငါးပါးသီလအကြောင်း မြတ်စွာဘုရားအ ကြောင်း သံဃာတော်များအကြောင်း၊ ဓမ္မအကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအရေးတော်ပုံ(၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု)